Isiqinisekiso-iShanghai Gianty yokuThengisa Co, Ltd.
I-BPI yeyona nto iphambili ekuqinisekiseni ukuba iimveliso ezisetyenziswayo kunye nokupakisha kuMntla Melika. Inkqubo yethu yokuqinisekiswa iqinisekisa ukuba iimveliso kunye nokupakisha ezibonisa uphawu lwe-BPI ziye zavavanywa ngokuzimeleyo kwaye zaqinisekiswa ngokwemigangatho esekwe yesayensi. Sikwakhuthaza ezona zinto zilungileyo zokuphambuka kunye nokufunyanwa kwezinto ezinokubumba ngokufaka umgquba kamasipala noworhwebo.
Ukupakisha okanye iimveliso ezinelobumba ye-compost OKULUNGILEYO kuqinisekisiwe ukuba ziya kufakwa kwisityalo somgquba womatshini. Oku kusebenza kuzo zonke izinto zazo, i-inki kunye nezongezo. Indawo ekubhekiswa kuyo ngenkqubo yesiqinisekiso yinto ehambelanayo EN 13432: 2000 esemgangathweni: nakweyiphi na imeko, nayiphi na imveliso enophawu lwe-compost ye-OK iyahambelana neemfuno ze-EU Packaging Directive (94/62 / EEC).
Esi siqinisekiso siqinisekisa ukuba iGianty ibhalisiwe kwi-US Food and Drug Administration ngokulandela umthetho weFDA wokuKhusela ukuTshiswa kweNtsholongwane kunye noMthetho weFederal Food and Drug Act, njengoko ulungisiwe nguMthetho weBioterrorism Act, kwaye ufumane le nombolo ingasentla yokubhaliswa kweFDA.
Uvimba wemiGangatho yeHlabathi ye-BRC uvimba osemthethweni lonke lophicotho olwenziwe ngokuchaseneyo neMigangatho yeHlabathi ye-BRC. Iziko eliqinisekisayo lilawula zonke iinguqu kuludwe lwendawo. amaxwebhu okuphicothwa kunye nemo yokuqinisekiswa kwengcaciso egcinwe kuVimba
I-SMETA imele amaZiko eSizwe okuPhicothwa okuPhicothayo kwaye yenye yeendlela ezisetyenziswa kakhulu kwihlabathi zokuphicothwa kweencwadi. Idibanisa ezona ndlela zibalaseleyo kwicandelo loxanduva lwentlalo. Lo mxholo uchaza indlela esekwe kwiKhowudi yokuSisiseko yokuThengisa (i-ETI).
Ngokungqinelana noMmiselo weKhomishini (i-EU) Hayi 10/11 yowe-14 kuJanuwari ngo-2011 kunye nezilungiso ukumisela ukufuduswa ngokugqibeleleyo yi-SGS.
Ngokungqinelana ne-FDA 21 CFR 175.300, i-extracatives iyonke ihlangabezana nemigangatho yayo yi-SGS.
Inkqubo yokuBek'esweni yokuThotyelwa kweNtlalontle yoLuntu (i-BSCI) yindlela yaseYurophu yokuphucula ukusebenza kwentlalo kumazwe athengisayo ngesisombululo sokuhlola imigangatho yentlalo.
IBisphenol A, edla ngokubizwa ngokuba yiBPA yichemicals efumaneka kwiiplasitiki ezinzima kunye neebhatyi zokutya neziselo ezinokuziphatha ngendlela efanayo kwi-estrogen kunye namanye amahomoni emzimbeni womntu. Sinesiqinisekiso sokuba akukho BPA kwiimveliso zethu.
Umgangatho we-ISO 9001 usekwe kwinani leemigaqo-nkqubo yolawulo esemgangathweni. Kubandakanya ukugxila kumthengi onamandla, ukukhuthaza kunye nokuthetha kolawulo oluphezulu, indlela yenkqubo kunye nokuphuculwa okuqhubekayo.
INDLELA ESINOKUKHANGELWA NGAYO 7P2170:
I-TÜV AUSTRIA yinkampani ekhokelayo yokuvavanya, yokuhlola kunye neyokuqinisekiswa kwehlabathi jikelele ukuba inikezele ngeenkonzo zokubhalisa / zesatifikethi ezizimeleyo.